တနျဖိုးရှိဖို့က အဓိက – One Daily Media
” မမေရေယျ သဈပငျတှကေလညျး အနိမျ့အမွငျ့ မတူကွဘူးနျော.. သားတို့ဘေးက ကောငျးပေ့၊ မွငျ့ပေ့ ဆိုတဲ့ သဈပငျကိုလညျး ဟိုကြီးမဲ မိသားစုက ကွီးစိုးထား တယျနျော အားငယျလိုကျတာ မမေရေယျ ” တဲ့။
” လာလိုကျခဲ့ ” ဆိုပွီး ခပျမွငျ့မွငျ့ကို ပြံတကျသှားပါတယျ ။ ဒီလိုနဲ့ မွပွေငျနဲ့ အတနျအသငျ့ အမွငျ့ကို ရောကျတဲ့ အခါ သူ့ သားကို အောကျ ငုံ့ကွညျ့ခိုငျးလိုကျ ပါတယျ ။ ပွီးတော့ ငှကျမကွီးက..
” ကဲ သားရေ သဈပငျ အားလုံးကို မွငျရတဲ့ အမွငျ့ကနေ ကွညျ့လိုကျတော့ သူတို့ရဲ့ အမွငျ့တှဟော အရေးပါသေး သလား ? အားလုံးဟာ မွပွေငျမှာပဲ ရှိနကွေတာပါ.. နောကျ မမေတေို့ နတေဲ့ သဈပငျက ပိုတောငျ ကွီးနသေေးတယျ သားရဲ့ ကွညျ့လိုကျပါဦး.. အပှငျ့အခကျတှေ ဝဆောပွီး ပွနျ့ကားတဲ့ အကိုငျးအလကျတှနေဲ့ တျောတျောလေး လှနပေါတယျ သားရယျ “\_
” သဈပငျအနိမျ့ အမွငျ့ကို မမေတေို့ မပွငျနိုငျကွဘူး.. ဒါပမေယျ့ မမေတေို့ ရှုမွငျတဲ့ ပုံစံကို ပွငျလိုကျတယျလေ.. ဒီအခါ စိတျသကျသာရာ ရလာတယျမလား သား.. ဘဝမှာလညျး မလိုလား အပျတဲ့ အရာတှကေို မနှိုငျးယှဉျနဲ့ .. တဈခါတဈခါ သဈပငျမွငျ့မှာ ရပျနားမိ လလေေ ၊ လေ ပိုတိုကျ ခံရလလေေ ဖွဈလိမျ့မယျ.. စိတျမညဈပါနဲ့ သား.. အပငျဖြားတှထေကျ ပိုမွငျ့အောငျ ပြံသနျးကွညျ့လိုကျ စမျးပါ.. တိုကျလာတဲ့ လကေိုပါ လဟေုနျ စီးပဈနိုငျတယျ ဆိုတာ တှေးရလိမျ့မယျ သား ”
” နောကျ မကျြစိတဈဆုံး အမွငျနဲ့ပဲ ဘယျတော့မှ မဆုံးဖွတျနဲ့ သားရေ.. အားလုံးကို မွငျရတဲ့ အမွငျ့ကို ပြံနိုငျအောငျ ကွိုးစား.. အပျေါစီးကနေ ကွညျ့နိုငျဖို့ပဲ ကွိုးစား.. အောကျက ဘာမဟုတျတဲ့ ပွိုငျဆိုငျမှုတှနေဲ့ အခြိနျကုနျနေ ကွတဲ့သူတှေ ၊ ကိုယျ့မှာရှိတဲ့ အရာကို တနျဖိုး မထားတတျဘဲ.. တခွားသူတှရေဲ့ အကွောငျးအရာတှကေိုသာ စိတျဝငျစား၊ စိတျအားငယျနေ သူတှလေညျး အမြားကွီးပဲ သား.. ”
” ကြီးတှကေ အုပျစု တောငျ့တငျးကွတယျ.. အမတေို့က သားအမိ နှဈကောငျတညျး.. ဒါပမေယျ့ တောငျသူဦးကွီးတှေ ဘယျသူ့ကို ခဈြကွတယျ ထငျသလဲ ?
အမတေို့ကိုပဲပေါ့ သား.. အမတေို့လညျး သူတို့လို အဆငျးမှဲ ၊ အဆငျးမဲတာပဲလေ.. ဒါပမေယျ့ အမတေို့က သူတို့ထကျ အသံသာတယျလေ သားရဲ့.. ဒီလိုပဲ သားရေ ကိုယျ့မှာ အားသာခကျြတှေ အမြားကွီး ရှိတယျ ”
” အဲဒါကို သိအောငျ ကွိုးစား.. ကိုယျ့ကိုယျကိုယျ တနျဖိုးထား.. ဘဝဆိုတာ တခွားသူတှရေဲ့ဘဝနဲ့ ခိုငျးနှိုငျးဖို့ မဟုတျဘူး.. အကြိုးရှိဖို့၊ တနျဖိုးရှိဖို့နဲ့ ကိုယျတိုငျ တညျဆောကျယူဖို့ပါ.. ဘယျတော့မှ မမပေ့ါနဲ့ သား.. ”
” မေမေရယ် သစ်ပင်တွေကလည်း အနိမ့်အမြင့် မတူကြဘူးနော်.. သားတို့ဘေးက ကောင်းပေ့၊ မြင့်ပေ့ ဆိုတဲ့ သစ်ပင်ကိုလည်း ဟိုကျီးမဲ မိသားစုက ကြီးစိုးထား တယ်နော် အားငယ်လိုက်တာ မေမေရယ် ” တဲ့။
” လာလိုက်ခဲ့ ” ဆိုပြီး ခပ်မြင့်မြင့်ကို ပျံတက်သွားပါတယ် ။ ဒီလိုနဲ့ မြေပြင်နဲ့ အတန်အသင့် အမြင့်ကို ရောက်တဲ့ အခါ သူ့ သားကို အောက် ငုံ့ကြည့်ခိုင်းလိုက် ပါတယ် ။ ပြီးတော့ ငှက်မကြီးက..
” ကဲ သားရေ သစ်ပင် အားလုံးကို မြင်ရတဲ့ အမြင့်ကနေ ကြည့်လိုက်တော့ သူတို့ရဲ့ အမြင့်တွေဟာ အရေးပါသေး သလား ? အားလုံးဟာ မြေပြင်မှာပဲ ရှိနေကြတာပါ.. နောက် မေမေတို့ နေတဲ့ သစ်ပင်က ပိုတောင် ကြီးနေသေးတယ် သားရဲ့ ကြည့်လိုက်ပါဦး.. အပွင့်အခက်တွေ ဝေဆာပြီး ပြန့်ကားတဲ့ အကိုင်းအလက်တွေနဲ့ တော်တော်လေး လှနေပါတယ် သားရယ် ”
” သစ်ပင်အနိမ့် အမြင့်ကို မေမေတို့ မပြင်နိုင်ကြဘူး.. ဒါပေမယ့် မေမေတို့ ရှုမြင်တဲ့ ပုံစံကို ပြင်လိုက်တယ်လေ.. ဒီအခါ စိတ်သက်သာရာ ရလာတယ်မလား သား.. ဘဝမှာလည်း မလိုလား အပ်တဲ့ အရာတွေကို မနှိုင်းယှဉ်နဲ့ .. တစ်ခါတစ်ခါ သစ်ပင်မြင့်မှာ ရပ်နားမိ လေလေ ၊ လေ ပိုတိုက် ခံရလေလေ ဖြစ်လိမ့်မယ်.. စိတ်မညစ်ပါနဲ့ သား.. အပင်ဖျားတွေထက် ပိုမြင့်အောင် ပျံသန်းကြည့်လိုက် စမ်းပါ.. တိုက်လာတဲ့ လေကိုပါ လေဟုန် စီးပစ်နိုင်တယ် ဆိုတာ တွေးရလိမ့်မယ် သား ”
” နောက် မျက်စိတစ်ဆုံး အမြင်နဲ့ပဲ ဘယ်တော့မှ မဆုံးဖြတ်နဲ့ သားရေ.. အားလုံးကို မြင်ရတဲ့ အမြင့်ကို ပျံနိုင်အောင် ကြိုးစား.. အပေါ်စီးကနေ ကြည့်နိုင်ဖို့ပဲ ကြိုးစား.. အောက်က ဘာမဟုတ်တဲ့ ပြိုင်ဆိုင်မှုတွေနဲ့ အချိန်ကုန်နေ ကြတဲ့သူတွေ ၊ ကိုယ့်မှာရှိတဲ့ အရာကို တန်ဖိုး မထားတတ်ဘဲ.. တခြားသူတွေရဲ့ အကြောင်းအရာတွေကိုသာ စိတ်ဝင်စား၊ စိတ်အားငယ်နေ သူတွေလည်း အများကြီးပဲ သား.. ”
” ကျီးတွေက အုပ်စု တောင့်တင်းကြတယ်.. အမေတို့က သားအမိ နှစ်ကောင်တည်း.. ဒါပေမယ့် တောင်သူဦးကြီးတွေ ဘယ်သူ့ကို ချစ်ကြတယ် ထင်သလဲ ?
အမေတို့ကိုပဲပေါ့ သား.. အမေတို့လည်း သူတို့လို အဆင်းမွဲ ၊ အဆင်းမဲတာပဲလေ.. ဒါပေမယ့် အမေတို့က သူတို့ထက် အသံသာတယ်လေ သားရဲ့.. ဒီလိုပဲ သားရေ ကိုယ့်မှာ အားသာချက်တွေ အများကြီး ရှိတယ် ”
” အဲဒါကို သိအောင် ကြိုးစား.. ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် တန်ဖိုးထား.. ဘဝဆိုတာ တခြားသူတွေရဲ့ဘဝနဲ့ ခိုင်းနှိုင်းဖို့ မဟုတ်ဘူး.. အကျိုးရှိဖို့၊ တန်ဖိုးရှိဖို့နဲ့ ကိုယ်တိုင် တည်ဆောက်ယူဖို့ပါ.. ဘယ်တော့မှ မမေ့ပါနဲ့ သား.. ”